Liverpool Oo Shaacisay Muddada Dheer Ee Uu Garoomada Ka Maqnaan Doono Goolhaye Alisson Becker - Gool24.Net
Liverpool Oo Shaacisay Muddada Dheer Ee Uu Garoomada Ka Maqnaan Doono Goolhaye Alisson Becker
Tababaraha Liverpool, Jurgen Klopp ayaa shaaciyey muddada uu garoomada ka maqnaan doono goolhaye Alisson Becker oo uu dhaawac kasoo gaadhay garabka.
Goolhayaha reer Brazil ayaa seegay kulankii bahdilaaddu ku dhacday Liverpool ee Aston Villa ay 7-2 kaga adkaatay, taas oo uu ku jiray Adrian oo qaladaadkii dhacay ee goolasha sababay midka koowaad sameeyey, sidoo kalena bandhiggiisu ahaa mid liitay.
Warbaahinta Ingiriiska ayaa sheegtay in shaqaalaha caafimaadka Liverpool ay ka fiirsanayaan inay qalliin garabka kaga sameeyaan Alisson, taas oo haddii ay dhacdo keeni doonta in muddo badan uu garoomada ka maqnaado.
28 jirkan ayaa hore loo filayay inuu taam u noqon doono ciyaarta ay Everton ku ballansan yihiin marka laga soo laabto kulamada caalamiga ah, taas oo ay foodda is dari doonaan October 17, iyadoo waliba Everton haysa hoggaanka horyaalka Premier League oo wada badisay dhamaan afartii ciyaarood ee ay dheeshay illaa hadda.
Jurgen Klopp ayaa xalay la weydiiyey inuu sheego muddada uu Alisson dhaawaca kaga maqnaan doono garoomada, waxaanu sheegay in isu-geyn muddo lix usbuuc ah aanu awoodi doonin inuu ciyaaro.
Kulanka ay Liverpool ku martigelin doonto Manchester City marka ay taariikhdu tahay November 7 ayaa la sheegayaa inay noqon doonto ciyaarta ugu soo horreysa ee Alisson uu fursad u heli doono inuu ciyaaro.
Klopp oo ka hadlayay muddada uu maqnaanayo Alisson ayaa yidhi: “Fursad uma heli doono inuu ciyaaro kulanka Everton. Si dhab ahna uma garanayno muddada uu maqnaanayo, waxaana dhici karta inuu noqon karo dhaawac kasii xun sidii la filayay, waana hubaal. Nasiib yar ayaanu yeelan karnaa laakiin ma ciyaari doono kulanka Everton.
“Ma doonayo inaan cayimo waqti, laakiin waxa suurtogal ah afar toddobaad, lix toddobaadna way noqon kartaa sida la filayo balse ma garanayo.”